Duqa magaalada Muqdisho Eng Yarisow oo sheegaya inuu ka shaqeyn la’ yahay siyaasiyiin iyo xildhibaano – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Duqa magaalada Muqdisho Eng Yarisow oo sheegaya inuu ka shaqeyn la’ yahay siyaasiyiin iyo xildhibaano
Allhadaaftimo May 2, 2018 May 2, 2018 Uncategorized
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa shaaca ka qaaday inuu ka shaqeyn la’ yahay siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowlada.
Eng Yarisow guddoomiyaha gobolka Banaadir oo muddo saddex bilood ah haya xilka guddoomiyaha gobolka Banaadir isbedel badana oo dhinaca horumarka ah laga dareemay mudadii uu xilka hayay ayaa sheegay in saddexdaa bilood ee uu xilka hayay uu la tacaalayay madax ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay uga adeegi la’ yihiin Shacabka.
Waxa uu sheegay in rag ay saaxiibo yihiin oo isugu jira Xildhibaano,Wasiiro iyo siyaasiyiin ay Xafiiskiisa yimaadaan,iyaga oo Shacabkii loo Shaqeyn lahaa cariiriya.
“Runtii muddo saddex bilood ah ayay nagu qaatay si aan xal uga gaarno siyaasiyiin,Xildhibaano iyo Wasiiro danley ah oo xafiiskeyga soo buux dhaafiyey una shaqeyn waayey bulshadii aan madaxda u ahaa laakin hadda xal ayaan ka gaaray oo waqti ayaan u sameeyey ayuu yri guddoomiye Yariisow.”ayuu yiri duqa magaalada Muqdisho.
Sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku eedeeyay xildhibaano iyo wasiiro ay ugu yimaadaan sidii dad loogu fulin lahaa dano gaar ah taasna ay tahay mid aan xaq ahayn.
Warar soo baxayay maalmihii la soo dhaafay ayaa sheegayay in duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ka joojiyay lacago hotelo loogaga bixin jirey siyaasiyiin ku dhow dhow madaxtooyada,haatana lagu bilaabay dacaayado wax loogu dhimayo shaqsiyadiisa taasoo laga dareemayo shaqsiyaad ku dhow dhow madaxda ugu sareysa dalka.
Halkan ka dhagayso Duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlaya siyaasiyiinta uu ka shaqeyn la’ yahay,
Previous Madaxweyne Muuse Biixi oo amar Culus dul dhigay Mayarada Degmooyinka Somaliland
Next Madaxweyne Gaas oo maanta shaqada ka cayriyey Shaqaalihii Wasrada Kaluumaysiga Puntlan laga Billaabo Wasiir Xigeenkii